Kulankii Golaha Aqalka Sare ee BFS oo Kooram la’aan u baaqday – Kalfadhi
Kulankii Golaha Aqalka Sare ee BFS oo Kooram la’aan u baaqday
in Senator, Warar
Waxaa maanta baaqday kulankii Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu waday inuu ka qabsoomo xarunta fadhiyada Aqalka Sare ee BFS.
Kulanka maanta oo Ajendihiisa ahaa akhrinta 3aad ee wax ka bedelka Xeer hoosaadka Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaaney iman inta badan Senetorrada Aqalka Sare.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si kulul uga hadlay Kooram la’aanta kulankii Aqalka Sare waxa uuna ku tilmaamay nasiib darro iyo wax aan loo dulqaadin karin.
Guddoomiyaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xildhibaannada qaar ay subax hore yimaadaan, qaarna iska jiiftaan iyaga oo ay shaqo u taallo.
“Looma dulqaadan karo in Kooram la’aan kulamadii u baaqdaan, waayo shaqada Xildhibaanka ayaa ahay inuu ka soo qeyb galo kulamada fadhiyada Aqalka” ayuu yiri Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi
“Waa wax laga xumaado in Xildhibaanada qaar ay yimaadaan subax hore qaar kalane ay jiifaan iyadoo ay shaqo u taalo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah waxaa horyaallo hindise sharciyeedyo badan, hadda ayuuna ka soo laabtay fasaxii Radamaanka iyo ciidda, waxaase dhacday in qaarkood iska maqnaanaadaan.
Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya oo madaxda Galmudug ka dalbatay in waqtigeeda lagu qabto doorashada Galmudug
Waxaa goordhow furmay kulankii Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya